भूत प्रेत: विश्वास कि अन्धविश्वास ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अहिले इस्वीको २०१८ मा आएर फेरी एकपटक भूत प्रेतको अस्तित्वको बिषय जबर्जस्त ढंगले हाम्रो समाजमा प्रकट भएकोछ। यसले शायद पहिलो पल्ट इतिहासमा रेडियो, टेलिभिजन जस्ता आम-संचार माध्यममा यस ढंगले स्थान पाएका होलान। ललितपुरको एउटा घरमा एकमहिनादेखि निरन्तर भैरहेको घटनाले भूतको अस्तित्व अस्विकार गर्नेहरुलाई एउटा गतिलै चुनौती दिएकोछ। भ्रस्टाचारी र अपराधीको सातो खाने रबी लामिछाने पनि दिउँसो राती पिछा गर्दै त्यो घरमा पुग्छन्, तर केही गर्न सक्दैनन्, केही भन्न सक्दैनन्। बरु आफै अदृश्य भूतको चमत्कारिक करतूतलाई क्यामेरामा कैद गरेर फर्कन्छन् अनि आफ्नो लोकप्रिय कार्यक्रम 'सिधा कुरा जनता'संग मार्फत झन् सनसनी फैलाई दिन्छन्। हुनपनि, कुरा कुनै एक व्यक्तिसंग सम्बन्धित होइन, परिवारका सबै सदस्यले अनुभव गरिरहेको, घरमा डेरा गरी बस्ने थुप्रै मानिसहरुले अनुभव गरेको, त्यति मात्र होइन, टोल छिमेकका धेरै जनाले अनुभव गरिरहेको छन्।
कहिले अनौठो अवाज, कहिले घरका सिसा फुट्ने, कहिले घरका समान एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिने, कहिले भुइंमा रगत हुने आदि घटनाहरु प्रत्यक्ष देख्नेहरु आश्चर्य चकित मात्र होइन भयभित हुनु स्वाभाविक हो। घरमा डेरा बस्नेहरु घर छाडी हिंडेको, घरका परिवारका सदस्य घर छाडी अन्यत्र गई बसेको र छिमेकीहरु टोल छाडी आफन्तकोमा गई बसेको अवस्था सामान्य होइन। यसमा बुढा पुराना अनपढ मात्र छैनन्, डाक्टर इञ्जिनिअर आदि पढे लेखेका शिक्षित व्यक्तिहरु तथा नव-युवाहरु पनि छन्।
यसलाई कसरी अविश्वास गर्न सकिन्छ ?
भूत प्रेत: सम्बन्धी मेरो आफ्नै पनि केही अनुभवहरु छन्। सानैमा भूत प्रेत हुँदैन भन्ने राम्रै छाप परेको थियो । हाम्रो गाउँमा दिउसै पनि भूत हुन्छन भनी मानिसहरु जान डराउने ठाउँमा राति पुगेर रुखको पात टिपेर ल्याई मैले बाजी जित्ने काम गर्थें । निकै बहादुर कहलिन्थें। हाम्रो गाउँमा थुप्रैलाई भूत लागेर अनौठो देखिने घटना हुन्थ्यो । झार फुक हुन्थ्यो, निको हुन्थ्यो । महिलाहरुलाई चुडैल (पहाडतिर चुरेनी, सिधेनी, किच्किन्नी के भनिन्छ) लाग्ने गर्थ्यो। अनौठो ब्यबहार देखाउथे, कहिले एकोहोरो रोइरहने, कहिले हाँसिरहने गर्थे । सोखा (धामी, झाक्री) ले उनीहरुबाट अनेक कुराहरु बकाउथे । बिरामीलाई निकै सास्ती दिएर शरीरबाट चुडैललाई भगाउने गर्थे।
मलाई यी सबै नखरा (नाटक) लाग्थ्यो । केही बर्षपछि एउटा घटना भयो । मेरो आफ्नै घरमा बस्ने एक महिला (एक प्रहरी हवल्दारकी श्रीमती) त्यस्तै ब्यबहार देखाइन, एकोहोरो रोइरहिन कसैका केही कुरा पनि नसुन्ने गरी। म आफै सोखा बोलाउन गएँ । सोखा आए, उनको अनुहारमा हेरेर भने, उनलाई चुडैल लागेको होइन अस्पताल लैजानुस । उनलाई अस्पताल लगियो। डाक्टरले सुइ लगाएर शान्त बनाए। केही घण्टा पछि उनको होस् आयो । केही खाएको हो कि भनी उनलाई सोधियो, एकजनाले पेडा खान दिएको उनले भनिन् जसमा भाङ्ग रहेछ। हामीले हेर्दा चुडैल लागेको भनिएका महिला र उनको ब्यबहार कति पनि फरक थिएन, तर सोखाले छुट्याउन सके, जसले मलाई यो सोंच्न बाध्य बनायो कि चुडैल वा त्यस्तै कुनै आत्मा हुँदो रहेछ। यदि अन्दाजमा नै गर्ने भएको भए ती सोखाले केही कोशिस अबश्य गर्थे । भूत प्रेत आत्माको अस्तित्व अस्विकार गर्ने मेरो धारणामा परिवर्तन आयो। त्यसबेला मेरो उमेर मात्र चौध वर्षको थियो।
हामीले गरुड पुराणमा सुन्ने भूत-प्रेत आदिका बर्णन होस् वा लोक कथा, दन्त्य कथामा सुनिने भूत प्रेतका अपार गति र शक्तिका कुरा होस् वा फिल्म सिरियलमा देखाइने भूत-प्रेतका लिला होस्, बिश्वास गर्न नसके पनि पूर्ण रुपले अस्विकार पनि गर्न सक्दैनौ । अहिले मेडियामा यसरी प्रसारण भैरहेको बिषयमा विज्ञानका कुनै पण्डितबाट न त एउटा धारणा बाहिर आएको सुनिएकोछ, न त कुनै अनुसन्धान भैरहेको जानकारी आएको छ।
हिन्दु विश्वासमा मात्र होइन, भूत-प्रेतको अस्तित्व संसारको हरेक भागमा कुनै न कुनै रुपमा स्वीकारिएको छ। क्रिस्क्चियन धर्मावलम्बीहरुको पश्चिमी देशहरुमा पनि हरेक वर्ष ह्यालोइन भन्ने एउटा पर्व मनाइन्छ जसमा भूत, प्रेत, दुष्ट-आत्माहरुलाई टाढा भगाउनेगरी घर घरमा विभिन्न सजावट र गतिबिधि गरिन्छ। उनीहरुको मान्यता छ, आत्माहरु जताततै घुमिरहेका हुन्छन्, दुष्ट-आत्माहरुलाई दूर भगाउनु पर्छ। भूत प्रेतमा बिश्वास नगर्नेहरु थुप्रै छन् तर बिश्वास गर्नेहरुको पनि संसारमा कमि छैन। भूत प्रेत: बिश्वास कि अन्धविश्वास ? शायद यो प्रश्न सधैं अनुत्तरित नै रहने छ ।